Xubnaha DULMI-DIID Oo Loogu Yeedhay Shir Deg-deg Ah, Arrimaha Lagaga Hadlayo Iyo Goobta Uu Ka Dhacayo - Jigjiga Online
HomeSomalidaXubnaha DULMI-DIID Oo Loogu Yeedhay Shir Deg-deg Ah, Arrimaha Lagaga Hadlayo Iyo Goobta Uu Ka Dhacayo
Minnesota (Jigjigaonline) – Ururka DULMI-DIID ayaa ugu yeedhay xubnihiisa inay iskugu yimaaddaan shir degdeg ah oo ka dhici doona waddanka Maraykanka, kaas oo lagaga hadli doono ajande xaasaasi ah oo ku saabsan halgankii ururku soo galay ee xukunka lagaga tuuray madaxweynihii dhibaatada iyo tacaddiga ku hayey bulshada Dawladda Deegaanka ee Cabdi Iley.
War-saxaafadeed kasoo baxay ururka ayaa lagu sheegay in 27-ka bishan July ay iskugu yimaaddaan shir lagu qiimaaynayo natiijooyinkii kacdoonka shacabka.
Ururka Dulmi-diid oo saamayn xooggan ku leh siyaasadda Dawladda Deegaanka Soomaalida, halgan adagna la galay Cabdi Iley oo sannad ka hor xilka laga qaaday, xabsina la dhigay, ayaa waxa uu shirkan ku gorfeyn doonaa natiijooyinkii ka dhashay kacdoonkii xilka lagaga tuuray madaxweynaha hore, laakiin kumay sheegin in urur ahaan ay dib iskugu qiimayn doonaan.
War-saxaafadeedka kasoo baxay Dulmid-diid ayaa waxa uu u dhignaa sidan: “Dhamaan Xubnaha Gudiga sare ee Dulmi-Diid, waxaa la ogeysiinayaa inay isugu yimaadaan shir degdeg ah, oo lagu qiimaynayo natiijooyinkii Kacdoonka Shacabka si guud iyo si gaar ahba.
Xubin kasta oo gudiga sare kamid ah waxaan si sharafleh looga codsanayaa inuu kasoo qayb galo shira “Haduu ilahay yiraahdo”
Goobtu: Jijiga Business Center
Taariikhda: 27th July 2019
Dhinaca kale, dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxay aaminsan yihiin in ururka DULMI-DIID uu siyaasiyan hoos u dhac ku yimid intii isbeddelku ka dhacay Dawladda Deegaanka Soomaalida, kaddib markii xubnaha ugu sarreeya ay qaarkood xilal ka qabteen xukuumadda Mustafe laakiin inyar kaddib xilalkaas uu ka qaaday.
Dadka dhalliila ayaa waxa kale oo ay tilmaameen in gaabis ku yimid xidhiidhkii ururku la lahaa dhallinyarada iyo waxgaradka deegaanka oo ahaa cududda ugu weyn ee halganka horseedka ka ahaa, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay naftooda ku waayeen.
Si kastaba ha ahaatee, DULMI-DIID ayaa looga baahan yahay inuu dib isku abaabulo, iskuna qaabeeyo qaab xisbi siyaasi ah oo uu ururso dhallinyarada iyo wax-garadka deegaanka, isla markaana uu xafiisyo ka furto gobollada dalka, iskuna muujiyo si la mid ah ONLF oo hadda u muuqata xisbi siyaasadeed la loollamaya Xisbiga Dimuquraaddiga Soomaalida ee muddada dheer dalka hoggaaminayey.